ညတစ်ည ရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခု ပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ် မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက် မိတယ် – Let Pan Daily
ညတစ်ည ရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခု ပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ် မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက် မိတယ်
ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက် လေးတစ်ခုပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက် မိတယ်
အသင့် အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံ့ လှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော် သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေ အတွေး တစ်ချို့ ဝင်လာပြီး ကျွန်တော့ဟာ ကျွန်တော် တွေးနေမိတယ်
မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ မင်္ဂလာ မဆောင်ခင်က မိဘအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အချစ်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု့အောက်မှာနေပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်အခုကျ တစ်ချက်ထဲ ရုတ်တစ်ရက်မှာပဲ သိတောင် မသိထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘေးမှာ အမိန့်နာခံရင်းနဲ့ အိပ်စက်နေရပြန်တယ်ကျွန်တော့ကြောင့် တစ်သက်လုံး အတူနေခဲ့တဲ့ မိဘတွေကို စွန့်ခွာလာခဲ့ပြန်တယ် ▪ ကျွန်တော့ကို ပင်ပင်ပန်းပန်း ပြုစုရင်း ကျွန်တော့ရဲ့ မပြောပလောက်တဲ့ စကားလေးတွေနဲ့ သူ ပျော်နေပြန်တယ်
ပြီးတော့ ကျွန်တော့ကိုယ် ကျွန်တော် မေးခွန်းတစ်ချို့ မေးနေမိတယ် ▪ ဒါလဲပဲ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့လူတွေက မိမိရဲ့ ဇနီးမိန်းမကို ရိုက်နှက်နေ နိုင်ကြတာလဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့လူတွေက နှစ်ဘဝအတွက် ရည်စူးပြီး လာခဲ့သူကို တစ်ဘဝတောင် မကုန်သေးဘူး စိတ်ကုန်သွားကြတာလဲ ?
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့လူတွေက မိန်းမနဲ့သားသမီး ကို အိမ်မှာ ထားပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Hotel တွေမှာ အစားအသောက်ကောင်းတွေ စားသောက်နေနိုင်ကြတာလဲ ?
တစ်ချို့ တစ်ချို့က မိန်းမ မိသားစုကို အချိန် မပေးပဲ လမ်းပေါ်မှာပဲ အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံး လိုက်နေကြတယ် မိသားစုမှာ ဖခင်ရဲ့ နွေးထွေးမှု့ ဆိုတာ သားသမီးတွေ သိခွင့် မရတော့တာ ဘာ့ကြောင့်လဲ ?
ဒီလိုတွေ တွေးပြီး နောက်ဆုံး အဲ့ဒီ့ညမှာ ကျွန်တော် တွေးလိုက်တယ် ကျွန်တော့မှာ အမေ ရှိတယ် ကျွန်တော့မှာ မိန်းမလဲ ရှိတယ် ကျွန်တော် သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံးကို ဂုဏ်ယူ လေးစားသင့်တယ် မိန်းမကို ကြင်နာရင်း မိဘကို ရိုသေရင်း ပေါ့
သူတို့ နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော့ကို အသက်နဲ့ ရင်းပြီး လောကထဲကို ခေါ်ဆောင် လာခဲ့တယ်
နောက်တစ်ယောက်က တစ်လောကလုံးကို စွန့်ခွာ ပြီး ကျွန်တော့ အနားကို လာခဲ့တဲ့ သူပါ
လက်ရှိ ဘေးနားမှာ ရှိနေတဲ့ မိန်းမ ဆိုတာ ကလည်း တစ်ချိန် မှာ အမေ ဖြစ်အုံး မှာမို့
အမေ့ကို တန်ဖိုး ထား သလို မိန်းမကိုလဲ တန်ဖိုး ထားကြပါ
မိသားစုတိုင်း မိသားစုတိုင်း တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ချစ်ချစ် ခင်ခင် တစ်သက်တာ ပျော်ရွှင်စွာ နေသွားကြရ ပါစေ
မူရင်း စာရေးသူအား credit ပေးပါသည် ▪
ညတဈည ရဲ့ အဖွဈအပကျြလေး တဈခု ပါ ကြှနျတျော ကုတငျပျေါ မှာ မအိပျခငျြသေးပဲ လှဲလိုကျ မိတယျ
ညတဈညရဲ့ အဖွဈအပကျြ လေးတဈခုပါ ကြှနျတျော ကုတငျပျေါမှာ မအိပျခငျြသေးပဲ လှဲလိုကျ မိတယျ
အသငျ့ အိပျပြျောနရှောတဲ့ ကြှနျတော့ ရဲ့ အားနှဲ့နှဲ့ ခဈြဇနီးလေးရဲ့ နူးညံ့ လှပတဲ့ မကျြနှာလေးကို ကြှနျတျော သခြော ကွညျ့နရေငျးကနေ အတှေး တဈခြို့ ဝငျလာပွီး ကြှနျတော့ဟာ ကြှနျတျော တှေးနမေိတယျ
ဘယျလိုဖွဈလို့ တဈခြို့လူတှကေ မိနျးမနဲ့သားသမီး ကို အိမျမှာ ထားပွီး သူငယျခငျြးတှနေဲ့ Hotel တှမှော အစားအသောကျကောငျးတှေ စားသောကျနနေိုငျကွတာလဲ ?
နောကျတဈယောကျက တဈလောကလုံးကို စှနျ့ခှာ ပွီး ကြှနျတော့ အနားကို လာခဲ့တဲ့ သူပါ
လကျရှိ ဘေးနားမှာ ရှိနတေဲ့ မိနျးမ ဆိုတာ ကလညျး တဈခြိနျ မှာ အမေ ဖွဈအုံး မှာမို့
အမကေို့ တနျဖိုး ထား သလို မိနျးမကိုလဲ တနျဖိုး ထားကွပါ
မူရငျး စာရေးသူအား credit ပေးပါသညျ ▪
ဘုရား ရှိခိုး ပူဇော် ရသော အကျိုး ရှစ်မျိုး
“အဆိပ်အားလုံး ရဲ့ ဖြေဆေး ဘုရင် မြွေဟောက်ပင်” (ရှယ်ထားကြပါ)
ကိုဗဈကာလ ပွောငျးလဲ တိုးတကျလာတဲ့ အလုပျအကိုငျမြား နှငျ့ လူငယျတှေ အတှကျ အနာဂတျ ပုံစံ
သှေးထှကျအောငျ မှနျနတေဲ့ နိမိတျတဘောငျ နှငျ့ ယနေ့ မွနျမာပွညျ…